ဆီးရီးယား မြောက်ပိုင်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု သေဆုံးသူ ၅၃ အထိရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ဆီးရီးယား မြောက်ပိုင်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု သေဆုံးသူ ၅၃ အထိရှိ
EDITORS NOTE: Graphic content / Syrian men carryawounded man followingareported airstrike on the rebel-held town of Atareb in Syria's northern Aleppo province on November 13, 2017. At least 21 civilians, including five children, were killed on Monday in air strikes on Syria's northern Aleppo province, despitea"de-escalation zone" in place there, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said . / AFP / Zein Al RIFAI
ဆီးရီးယား မြောက်ပိုင်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု သေဆုံးသူ ၅၃ အထိရှိ
ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာ မနေ့က နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်မှာ ဈေးတစ်ခုကို လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်မှုလုပ်လို့ ကလေးငယ်တွေ အပါအဝင် ၅၃ ဦး သေဆုံးသွားပါတယ်။
ဈေးကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု သုံးကြိမ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူတွေထဲမှာ ကလေးငယ် ငါးဦး၊ ရဲသုံးဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အပျက်အစီးများပြားပြီး အဆောက်အအုံတွေ ထိခိုက်ကာ ပစ္စည်းတွေ လမ်းပေါ်မှာ ပြန့်ကြဲနေကြောင်းနဲ့ အရပ်သားတွေဟာ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ကယ်ထုတ်နေကြောင်း အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာန ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်က ပြောပါတယ်
ဆီးရီးယား နိုင်ငံမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်ပြီး လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေ ၃၃၀၀၀၀ ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးရီးယား မွောကျပိုငျး လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှု သဆေုံးသူ ၅၃ အထိရှိ
ဆီးရီးယားမွောကျပိုငျးမှာ မနကေ့ နိုဝငျဘာ ၁၃ ရကျမှာ ဈေးတဈခုကို လကွေောငျးကနေ တိုကျခိုကျမှုလုပျလို့ ကလေးငယျတှေ အပါအဝငျ ၅၃ ဦး သဆေုံးသှားပါတယျ။
သူပုနျတှေ သိမျးပိုကျထားတဲ့ အတာရပျဘျမှာ ဆီးရီးယားနဲ့ မဟာမိတျ ရုရှားတပျတှကေ ဈေးကို ဘာကွောငျ့ ပဈမှတျထား တိုကျခိုကျသလဲဆိုတာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မသိရသေးဘူးလို့ ဗွိတိနျအခွစေိုကျ ဆီးရီးယား လူ့အခှငျ့အရေး စောငျ့ကွညျ့ရေး အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။
ဈေးကို လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှု သုံးကွိမျလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး သဆေုံးသူတှထေဲမှာ ကလေးငယျ ငါးဦး၊ ရဲသုံးဦးလညျး ပါဝငျပါတယျ။ အပကျြအစီးမြားပွားပွီး အဆောကျအအုံတှေ ထိခိုကျကာ ပစ်စညျးတှေ လမျးပျေါမှာ ပွနျ့ကွဲနကွေောငျးနဲ့ အရပျသားတှဟော ဒဏျရာရသူတှကေို ကယျထုတျနကွေောငျး အဲဒီနရောမှာ ရှိနတေဲ့ အအေကျဖျပီ သတငျးဌာန ဓာတျပုံသတငျးထောကျက ပွောပါတယျ
ဆီးရီးယား နိုငျငံမှာ ၂၀၁၁ ခုနှဈက စတငျပွီး လကွေောငျးကနေ တိုကျခိုကျမှုတှကွေောငျ့ သဆေုံးသူ ဦးရေ ၃၃၀ဝ၀ဝ ရှိလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleမက္ကဆီကို တောင်ပိုင်းမှာ ရှစ်ဦး အသတ်ခံရ၊ အလောင်း ၁၂ လောင်း တွေ့
Next articleဗင်နီဇွဲလားကို လက်နက်ရောင်းခွင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ ပိတ်ပင်